Imibuzo Evamile - Gumzo
Nazi izimpendulo ezimbalwa emibuzweni ongaba nayo. Sicela ukhululeke ukusithinta uma ufuna olunye ulwazi
Ukushaya ucingo noma ungenele umhlangano kuGumzo?
Ukungena ekamelweni lokuxoxa, uzodinga i-url ezokufaka kulelikamelo Le URL uzoyiphiwa ngulowo oniphethe kulelikamelo lokuxoxa. Ungakajoyini ucingo, uzoceleka ukuba ubhalise ngokucinisekisa nge SMS ubese wakha i-profile yakho okungukuthi igama, i-avatar kanye negama lomsebenzisi
Ukusungula i-account kuGumzo
Ukusungula i-account, udinga inombolo yocingo ebhalisiwe. Uma usuyifakile inombolo yocingo, uzothola ozocinisekisa ngako kuSMS khona-ke usuzokwazi ukuyenza isebenze i-account ugcwalise imininingwane ye-profile okuyigama, i-avatar kanye negama lomsebenzisi
Uma ukwazile ukubhalisa ngemphumelelo, usungakwazi ukwakha amakamelo okuxoxa ngenani eliphansi kusukela ku KES 100
Ukumema abanye abasebenzisi
Ukumema abanye ekamelweni lakho lokuxoxa, kudingekile ubanike i-URL yekamelo lokuxoxa. Bazoceleka ukuthi babhalise basebenzise izincingo zabo wena-ke usuzokwaziswa uma sebelungele ukujoyina
Ukunikeza nge-screen sakho
Ukuze unike abanye i-screen sakho kudingeka uchofoze ikinobho lika ‘monitor’ eliphansi kwekamelo lakho lokuxoxa. Uzovezelwa izindlela ongazisebenzisa usasebenzisa indela yokunikezana i-screen.
U-Gumzo akakhokhelwa na?
Yebo. U-Gumzo akakhokhisi muntu okhona emhlanganweni
Uma ufuna ukuba neyakho imihlangano ukhokha uKES 100/iviki
Okwazi kabanzi, hlola ikhasi lethi lamanani khona lapha
Umthetho wokubuyisela imali kuwe?
Onke ama-account akwa-Gumzo acala ngokuphana ngelingakhokhelwa ithuba lesikhashane lokungena elikuvumela ukuthi uzizwele usizo lwethu. Akudingeki mininingwane nge-Credit Card noma leyo yezindlela zokukhokha ngezemishini ohambha nayo ukuze ukwazi ukusungula i-account yokuqala. Yazi lokhu, linye kuphela ithuba lokuzizwela usizo inombholo yocingo ngayinye. Uma usucedile ukuzizwela, uzonikezwa ithuba lokubhalisa ungenele iviki elilodwa ozolikhokhela uzitike kulolonkhe usizo olukhona.
Okudumazayo, singekwazi ukwengeza isikhathi sokuzizwela uma sesicale ukukukhokhisa ngeviki, asikwazi ukubuyisela inkokhelo engaphezulu kwalokho osuvele ukusebenzisile kulelo viki okulo. Waze wacala ukubhadalela noma nguyiphi yezinhlelo zethu, isicelo senkokhelo sizovele sizibike ngokwaso, ngosuku oluyilo evikini, okuzoqhubeka njalo-nje ngaphandle ukucishe wena. Ukukucisha kwakho kuvele kumise zonke izinkokhelo ebezizodingeka kokuzayo. Uma ungathokozi ngosizo lwethu noma kungasiphi isizathu, siyacolisa kakhulu kanti sifuna ukwazi ukuthi singalungisa kanjani.
Sicela usithinte ku: [email protected]
Ngithola umsindo omubi umangishaya
Ezikhathini eziningi, umsindo omubi uma ushaya wenzeka uma omunye wabashayile besebenzisa izipikha zabo bevule ne-microphone kakhulu, i-microphone ithatha umsindo osezipikheni, umsindo lowo ubese uyaphindelana. Isisombululo esiyiso ukuthi wonke okhona asebenzise ama-headphones aphinde/noma athulise bonke abangakhulumiyo. Ezikhathini eziwu 95%, kunye kwaloku kozoceda lenkinga.
U-Gumzo usebenza kwi-browser yakho evumela ukuthi angadingi okuningi kuze usebenze.
Nokho, ukuze usebenze kamnandi, i-computer yakho kumele okungenani ibe nalokhu okulandelayo:
Eyaleso sikhathi i-browser nesekelwe fanana no-Chrome, u-Safari noma u-Firefox
Eyaleso sikhathi i-system yokusebenza fanana no-MacOS noma u-Windows 10
Ulumeke i-internet lapho kusimame khona.
ILUNGELO LOKUNGENA KU-CAMERA NE-MIC
Vumela ukuthi onke ama-browser nama-systems okusebenza abe nelungelo ku-camera/i-mic
Ukuze ushayeleke kuGumzo, kufuneka unikeze i-browser yakho ilungelo lokusebenzisa i-webcam kanye ne-microphone. Bheka imiyalezo econdene nomshina owusebenzisayo :
I-Chrome (Eye-Desktop/I-browser ye-laptop)
Kwenziwa kanjena-ke ukuvumele i-camera ne-microphone ku-Chrome :
Khetha ikinobho lokukhiya (ikinobho le-video) maduze nesobunxele se-bar yokusesha.
Khetha ohleni oluzozivelela maduze ne-Camera kanye ne-microphone.
Shintsha ilungelo le-camera ne-microphone luye ku Allow ( ‘Vumela’).
Thinta kabusha ikinobho le-brower (cmd + R).
Uzoba nethuba lokuhlola umshina wakho ungakangeni kwabashayile ukuze uqinisekise ukuthi kusebenza kahle.
U-Chrome (i-Mobile/I-browser ye-Tablet)
Uyivumela kanjena-ke i-camera ne-microphone ukuthi ikwazi ukusebenza kumshina wakho we-Android :
Uma uqalisa ukungena ekamelweni okumiwa kulo noma ufacaza i-link onikwe yona, uzobuzwa ukuthi uyafuna yini ukuvumela i-camera ne-mic ukuthi zisebenze kusashayiwe.
Qiniseka ukuthi ukhethe Allow (‘Vumela’).
Kunjani uma i-camera ne-mic ivinjiwe? Nansi indlela yokuqalelisa phansi :
Thinta amacabhacabha ekoneni ngakwesokunene phezulu.
Vula ama Settings (“Ama-Settings”)
Vula u-Privacy (“Okufihliwe”)
Kheta uClear browsing data (Susa imininingwane yoku-browsa) ukuqalelisa phansi u-Chrome.
Uma kwenzeka usenezinkinga, sicela usithinte.
U-Safari ( Kwi-Desktop/ne-Laptop browser )
Ngokwakhe u-Safari uzokubuza ukuthi ayafuna yini ukuvumela uGumzo asebenzise i-camera ne-microphone emshineni wakho ngasosonke isikhathi ungena noma uvula kabusha ikhasi.
Kwenziwa kanjena-ke ukuphinde uvumele i-camera ne-microphone kwi-MacBook kanye ne iMac :
Vula u-Safari Preferences (“Okunconozayo”).
Hambha ku-Websites. (Ama-Website”)
Yana kumakinobho e-Camera kanye nawa-Microphone
Shintsha ukuvumeleka kuye ku-Allow
Qalisa kabusha u-Safari.
Uzoba nethuba lokuhlola umshina wakho ungakangeni kwabashayile ukuze uqinisekise ukuthi kusebenza kahle. Uma solo zikhona izinkinga, qalisa kabusha umshina wakho.
U-Safari ( Kwi-Mobile / i-Table browser )
Kwenziwa kanje ukuvumela i-camera kanye ne-microphone isebenziseke kumshina we-iOS :
Ukushaya emishineni ye-iOS, kudingeka unikeze amalungelo ku-webcam kanye ne-microphone. U-Safari udinga wenze lokhu njalo uma ushaya.
Cindezela u-Allow uma ubuzwa
Kwi-iOS 13 nokuya phezulu, ungakwazi ukuphinde ukhethe u-camera kanye no-microphone ukuze uvumeleke ngokokuzenzela usizakale ukungena kalula / ukuzizwela ukungena ngesineke.
Yana ku-Settings emshineni wakho
Pheqa uye phansi ubese uvula ikinobho lika-Safari
Qinisekisa ukuthi i-Camera ne-Microphone ifakwe ku-Allow
Qinisekisa ukuthi ukhethe ocishiwe u-Request Desktop Site
U-Firefox (i-Desktop/i-Laptop browser )
Kwenziwa kanjena ukuvumela i-camera kanye ne-microphone isebenze ku-Firefox :
Khetha ikinobho lokukhiya (ikinobho le-video) maduze nesokhohlo se-bar yokusesha.
Khetha ohleni oluzizozivelela maduze ne-Camera kanye ne-microphone.
Shintsha ilungelo le-camera ne-microphone luye ku Allow (if the icon is to be translated, it must be ‘Vumela’).
Thinta kabusha ikinobho le-brower (cmd + R)..
Kwenziwa kanjena-ke ukuphinde uvumele i-camera ne-microphone kwi-desktop / laptop
Chofoza bobabilo o-X ukuze Ususe lemvumo uphinde ucele kabusha.
Thinta kabusha ikinobho le-brower.
Uma usubuzwa, qinisekisa ukuthi usebenzisa i-camera ne-microphone efanele ubese ukhetha u-Allow
Bhalisa ukuze ukwazi ukuqala
Uzodinga inombholo yocingo ebhalisiwe ukuze ukwazi ukuqala.
Singeke nanini sinike abanye noma sithengise iminingwane yakho kwabanye noma sikwenze igaxekile.